Amandla ahlanzekile - Afrikhepri Foundation
ulwesihlanu, Febhuwari 26, 2021
Injini ye-Quasar 3C 273 FT
par UFabrice Tayimetha
TInjini yeQuasar 3C 273 FT ihlukile ngohlobo lwayo: inokwehluka kokukwazi ukusebenza ngaphansi kwamandla aphansi noma amandla aphezulu, nokusebenzisa ama-milliamperes ambalwa kuphela.
Futhi nokho, inikeza amandla aphezulu.
Injini ikhiqiza amandla kagesi (ama-volts angama-230 kuye kuma-3600 volts) ngaphandle kokusebenzisa omunye umthombo wamandla (ilanga, umoya, amanzi noma uphethiloli) esikhathini esiyiminyaka eyi-11 yokusebenza. Amandla wamahhala akhiqizwayo ayavunwa futhi asetshenziswa kabusha yi-motor nge-capacitor ephezulu kakhulu. Lokhu kubuye kwandise ukusebenza kwemoto nge-notch eyodwa.
Uma sikhuluma ngokusebenza kahle, sithola i- "Coefficient of performance" ehluka phakathi kuka-1.9 no-2.7 (lokhu kwehluka kungenxa yokukhethwa kokuklanywa kwenjini. Kodwa noma kunjalo, kusho ukuthi uvuna amandla aphindwe ka-2 kuye ku-3 owachitha it.
Isibonelo esincanyana: uma nje uqala injini ngebhethri, ingahlanganiswa nejenetha ephezulu esebenza kahle, futhi amanye ala mandla abuyiselwa ebhethri. Ugcina ukukhokhiswa okungaguquki, futhi ukhiqize insalela enkulu yamandla angenamkhawulo.
Ukwenza ngcono ukusebenza kwama-generator anejubane eliphansi, ngakolunye uhlangothi, (i-torque / isivinini) kanye nokusebenza kwamandla kwamandla ngakolunye uhlangothi lwama-drive motors, kuzovumela ukuthi ibanga likhuliselwe kumandla ahambelana nokukhiqizwa kwamandla. amandla ezimboni (500 kw to 1,000 Mw).
La mandla athe xaxa angathunyelwa ku-inverter ye-AC ukuze usebenze ngemishini yakho noma izimboni.
Ukukhiqizwa kwamandla kagesi kungabhekwa ngezindlela ezimbili: kusuka kumthombo okhona ohlinzeka nge-drive motor, singakhiqiza amandla weyunithi ngokusetshenziswa okujwayelekile. La mandla azonikela ngesengezo esisezingeni eliphansi esiqinisekisa ukwehla kwezinga lokutshalwa kwezimali.
Nge: UFabrice Tayimetha
UmTopiya uvula isicathulo semikhumbi ngamathayi avuselelwe
Fables Aesop (PDF)
Scientific magic kanye nezingozi zayo
Buka i-Life of Miles Davis (i-2016)